Shaete miili kaa'laanchi
Mitte bortajete giddo shaete qorqorsha surkittoro, Shaete miili kaa'lamaanchi umisiloosaasinchimmani hanafanno. Konni kaa'lamaanchi giddo, shaete qorqorshi giddo hiitti mashalaqqe reqeshshantinoro xawisa dandaatto.
Fani Forme qorqorsha uduunugaxa, qiphisi Roore qorqorate bido, qiphisi Shaete qorqorsha barete finco bidonna goshooshate ajo.
Fani/Huni kaa'lamaano bido horoonsidhe Kaa'laamaanchu umisiloosaasinchimanni hanafannokki gede hoola dandaatto.
Shaete miili Wizarde: Barete doo'ro
Shaete qoroqrshi bare giddo hiitti bare leella hasiissannoro xawisanno.
Title is: Shaete miili kaa'laanchi